Ụbọchị My Pet » Atụmatụ na iji Ghọọ a chick Igwe Ọdụdọ
Olee otú ị na-adọta ndị nwaanyị nke na nrọ gị? Ezie na ọ pụrụ kasị ụmụ okorobịa a ogologo oge jupụtara ọnwụnwa na njehie, anyị weere na a na ndepụta nke Atụmatụ otú i nwere ike na-a chick magnet na-ahụ gị ga-eme n'ọdịnihu na nwunye.
NDỤMỌDỤ #1: Jụrụ Ajụ bụghị mgbe niile a ezi jụrụ
Were ya na ị izute a nwanyị mara mma, malite mkparịta ụka ahụ ị na-ahụ na o nwere enyi nwoke. Ezie na ọtụtụ ụmụ okorobịa ga-na dị ka ihe ịrịba ama na-atụgharị gburugburu na-ahapụ, ị na-ekwesịghị. Nke a abụghị ihe ịrịba ama nke jụrụ ma ọ bụ na ọ na-egosi na ọ bụ enweghị mmasị. Ọ bụrụ na mkparịta ụka na-asọpụta were were na ọchị na ịmụmụ ọnụ ọchị na, na-ndị dị ka ihe ịrịba ama gị. A nwoke n'ezie ka mụtara nkà nke na-adọta ndị inyom bụ ezi ma maara a ọma inyom mgbe ọ na-ahụ ya. Dị nnọọ n'ihi na ọ bụ ugbu a dịghịzi adị apụtaghị na ị ga-enwe ohere. Nke a bụ ohere i na-ahụ maka ya. Ụfọdụ n'ime ndị kasị mma mmekọrịta na alụmdi na nwunye na-amalite site enyi.
NDỤMỌDỤ #2: Kwụpụta
Eguzo si ìgwè mmadụ dị oké mkpa na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị idaha. E nwere ọtụtụ ụmụ okorobịa na-ekwu otu ihe ahụ na-achụ otu ụzọ ka ị na-. Ya mere, olee otú ị kwụpụta? -Abịa gafee obi ike, bụghị cocky. Nwee ezi ma na-achọta ọdịmma na ntụrụndụ na ị ma òkè. Ma lezie, na-iche onwe gị. Ọ bụrụ na ọ pụtara na ka na-, ịbụ na ị ga-adọta ndị ziri ezi nwaanyị.
NDỤMỌDỤ #3: Mee a Njikọ
N'ikwere ihe niile na-abịa nke a n'ọnụ nwanyị tinyere n'ikwere na niile ya echiche na nhọrọ ọ bụghị otú iji merie ihe karịrị otu nwaanyị. Women na-mgbe na-achọ onye kwekọrọ na ihe niile ọ na-ekwu. Anyị na-amasị a ịma aka. -Arụ ụka dị iche iche echiche, echiche, ọdịmma, na agụụ na-enyere aka na-etolite a miri njikọ. A nwaanyị na-achọ ka ihe n'eziokwu metụtara otu nwoke.
NDỤMỌDỤ #4: Ike
Women agbalịsi a nwunye bụ onye dị ike ma na-adọrọ a n'ọkwá ka elu ma n'ụzọ mmetụta uche na uche. Ezie na ụfọdụ ụmụ okorobịa na-eche dị ka ma ọ bụrụ na ha nwere ike ghara adọta a nwaanyị n'ihi na ha na-enweghị ego, a oké ọrụ, ma ọ bụ elu ọnọdụ mmadụ, na-abụghị eziokwu. Women na-dọtara a nwoke na ike agwa na onye maara ihe ọ chọrọ. Ma, ọ bụghị ịghọtahie a ike. N'ihi na onye na-esetịpụ ezi ike adịghị atụ ụjọ na-egosi ya na-mwute na ihunanya n'akụkụ.
NDỤMỌDỤ #5: Mechie Deal
Ọtụtụ ná ndị ikom ịdaba enyi mpaghara ka ha na-amaghị otú imechi ndibiat. Enweghị akara ndibiat, adịghị anya ị ga mara dị ka n'anya na ịhụnanya Ihọd enyi, na mwute ikwu na a ọnọdụ ga-ike tufuo. Ụmụ okorobịa nwere ike inwe n'akụkụ esoro na uche zuru okè ohere ime ka a nwaanyị ha nanị n'ihi na ha amaghị ihe na-eme. N'ịbụ ubé ike ike tinyere zeroing na isi ihe ịrịba ama a inyom na-eziga gị ga-enyere imechi ndibiat.
Site ịmụta n'elu Atụmatụ, ị ga-abụ na ụzọ gị na-adọta mmasị nwaanyị nke na nrọ gị.